के शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउने बित्तिकै २५ लाख ऋण पाइन्छ त ? यस्तो छ प्रक्रिया - Nepaliraibar
के शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउने बित्तिकै २५ लाख ऋण पाइन्छ त ? यस्तो छ प्रक्रिया
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था चार वर्ष अघिदेखि शुरुवात भएको हो । सो समयमा ७ लाखको अधिकतम सीमा थियो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ ।
तर यसलाई बिलकुलै सरकारको नयाँ कार्यक्रमको रुपमा बुझ्नेहरू पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो बुँदा पढे तब युवाहरु विलकुलै नयाँ कार्यक्रम आए जसरी सामाजिक सञ्जालमा पोखिए ।
कसैले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने हो अनि आफ्ना पहिलाको ऋण चुक्ता गर्दै जाने हो भन्दै लेख्न भ्याए भने कसैले प्रमाणपत्रको मूल्य बल्ल बुझेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालका भित्तामा अभिव्यक्त भए । मानौँ शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने बित्तिकै २५ लाख हात परिहाल्छ जसरी । तर, ऋण लिन त्यति सजिलो भने छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने हालसम्म यस्तो ऋण पाउनेको संख्या १३९ जना मात्र छन् ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण ९बिमा० गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत मात्रै ब्यहोरे पुग्ने व्यवस्था छ । ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत शोधभर्ना हुनेछ ।
शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि सबैभन्दा पहिला सो लिने व्यक्तिसँग स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान प्रमाणपत्र० हुनु जरुरी छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ । तर के उद्यम गर्ने हो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट प्रस्तावको आवश्यक पर्छ । २५ लाखको सीमालाई मौद्रिक नीतिमै समेटिने राष्ट्र बैङ्क स्रोतले जनाएको छ । राताेपाटीबाट ।
विश्वकप छनोट : नेपाल जोर्डन भिड्दै